यौन र सेक्सका कुरा सुन्दा काउकुती लाग्छ
रेखा राई, मोडल
रेखा राईलाई घर परिवारबाट कलाक्षेत्रमा लाग्न सपोर्ट छ । सबैको सहयोगका कारण उनी कलाक्षेत्रमा लागेकी छिन् । म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ शुरु गरेकी रेखाले धमाधम काम पाउन थालेकी छिन् । रेखाको उचाइँ होँचो भए पनि काममा उचाइँ छुन थालेकी छिन् । उदयपुर जिल्लाको गाईघाट स्थायी घर भएकी रेखाका बाबुआमा, भाई, दाई र दिदी छन् । उनी कान्छी छोरी हुन् । प्लस टु अध्ययन गरेकी रेखा दुई दशकी भइन् । रेखा डेली डान्सर पनि हुन् । बेली डान्सकै लागि रेखा परिचित छिन् । उनै रेखा राईसँग गरिएको कुराकानीः–
कति भयो मोडलिङमा लागेको ?
सानैदेखि गीतसंगीत, नाचगानमा रुचि थियो । एक वर्षजति भयो मोडलिङमा लागेको छ ।
पहिलो म्युजिक भिडियो याद छ ?
छ नि ! ‘मेरो नाममा कोरेको पत्र’मा मोडलिङ गरेकी हुँ । गायिका सुमिना लोले गीत गाएको गीतमा मोडलिङ गरेकी थिएँ । पहिलो अभनुव मेरा लागि अत्यन्तै संस्मरण योग्छ । भुल्न सक्छिन ।
अहिलेसम्म थुपै्र म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गर्नु भयो होला है ?
धेरै त खेलेको छैन । तर, जतिमा मोडलिङ गरेको छु मेरोतर्फबाट राम्रो गरेको छु । म्युजिक भिडियो हेर्नेहरूले राम्रो छ भनेर प्रतिक्रिया दिने गर्नुभएको छ ।
स्टेज कार्यक्रमहरूमा कत्तिको बोलाउँछन् ?
बोलाउँछन् । जाने गरेको छु । म स्टेज कार्यक्रमहरूमा नृत्य गर्ने गरेकी छु । म स्टेज कार्यक्रमहरूमै अलिक धेरै व्यस्त हुने गरेको छु ।
कलाकारलाई विदेशमा पनि बोलाउँछन् कार्यक्रमका लागि तपाई जानु भएको छ कि छैन ?
गएको छु । कतारमा गएर कार्यक्रममा नृत्य गरेको छु । सिक्किम पनि गएको छु । विदेशमा बोलाउनु हुन्छ । स्वदेशका कार्यक्रममा अलिक धेरै बोलावट हुने गरेको छ ।
विदेश र स्वदेशका कार्यक्रममध्ये धेरै पारिश्रमिक कहाँ पाइन्छ ?
विदेशमा अलिक धेरै पारिश्रमिक पाइन्छ । नेपालमा पनि पाइन्छ । तर, अलिक थोरै हुन्छ । जे होस् मलाई चित्त बुझ्ने गरेर पारिश्रमिक लिने गरेको छु ।
विदेशमा कलाकारहरूलाई दुरव्यवहार हुन्छ भन्छन् नि हो ?
म त पहिलो पटक कतारमा गएको थिएँ । आयोजक र दर्शक सबैले राम्रो गर्नुभयो । त्यस्तो कुनै दुरव्यवहार भएको मलाई अनुभव भएन ।
स्टेजमा नृत्य गर्दा तपाईले लगाउने ड्रेसअप कस्तो हुने गरेको छ ?
गीतअनुसार ड्रेसअप गर्ने गरेको छु । म बेली नृत्य गर्छु । बेली डान्स गर्दा गुन्युचोली लगाउने कुरा त हुँदैन नि ! गीतको भावअनुसार नै ड्रेस लगाउने गरेको छु ।
तपाईका तस्बिरहरूमा थोरै कपडा देखिन्छ नि कारण के हो ?
त्यस्तो थोरै कपडा लगाएको कहाँ देखिएको छ र ? मैले सबै प्रकारको कपडा लगाउने गरेको छु । आफूलाई सुहाउने खालका कपडा लगाउने गर्छु । तपाईले भनेको कुरा मैले बुझेँ । तर, त्यस्तो हेर्नै नहुने कपडा लगाएको छैन ।
तपाई आफूलाई सुहाउने कपडा कुन हो जस्तो लाग्छ ?
सबै प्रकारको कपडा लगाउँछु । सबै कपडा सुहाएको जस्तो लाग्छ । विशेष गरेर टुपिस कपडा मलाई सुहाएको भनेर साथीभाईको टिप्पणी आउँछ । त्यस्तो खासै केही छैन । सबै कपडा मन पर्छ ।
तपाईको सेक्सी कुरा कुन हो ?
मलाई मेरो ओठ मन पर्छ । तर, शुभेच्छुकहरूले मेरो ‘फिगर’ले चर्चा गर्छन् । कसैले मेरो हिप पनि मन पराउँछन् । शुभेच्छुकहरूको आ–आफ्नो हेराईमा भर पर्ने कुरा हो । यही कुरा सेक्सी छ भन्ने कुरा म कसरी भनुँ ?
प्रेम प्रस्ताव आउँछ कि आउँदैन ?
प्रेम प्रस्तावहरू आउँछन् । त्यसलाई धेरै महत्वका साथ लिने गरेको छैन । म आफ्नो करियरमा ध्यान केन्द्रित गरिहेको छु । विशेष गरेर फेसबुक म्यासेञ्जरमा आई लभ यू, व्युटिफुल, हट, सेक्सी आदि म्यासेज र कमेन्ट आउने गर्छ । मैले यी कुराहरूलाई साधारण रुपमा हेर्छु ।
तपाईले मन पराउने कुनै केटा त होला नि ?
मन नपर्ने भन्ने पनि हुन्छ र ? मन पर्छ नि ! तर कुन हिसावले मन पराउने हो त्यो आफूमा भर पर्ने हुन्छ । बिहे गर्ने गरेर मन पराएको भने छैन ।
बिहे गर्ने हो । भाग्यले जहिले जुराउँछ त्यहीले बिहे गरौँला । अहिले नै गरौँ भनेर सोँचेको छैन । भाग्यलाई विश्वास गर्ने मान्छेँ हुँ ।
मोडलिङमा विशेष गरेर महिला कलाकारहरू विवादमा आइरहन्छ । निर्माता, निर्देशक आदिसँग यौनसम्बन्धका कुराहरू जोडिएका हुन्छ ? तपाईको नाम कतै जोडिएको त छैन ?
अहिलेसम्म त्यस्तो केही भएको छैन । तपाईको शंका जायज छ । मैले पनि सुनेको छु । म मेरै आफ्नै मेहनतले यो ठाउँसम्म आएको हुँ । कसैसँग नाम जोडिएको हुन्थ्यो भने म सायद धेरै माथि जान्थेँ होला । तपाईसँग मेरो भेट हुँदैन थियो कि ? त्यही सम्बन्ध नभएकै कारण तपाईसँगको अन्तर्वार्ताका लागि आइपुगे ।
यौनसम्बन्धका बारेमा तपाईलाई केही थाहा छ ?
थाहा छ । यो सामान्य विषय हो । समाचार, टिभी, अनलाइन आदिमा पढ्दै र सुन्दै आएको विषय हो । यसलाई धेरै ठूलो विषयका रुपमा हेरेको छैन ।
तपाई आफू यौनसम्बन्धामा पर्नु भएको छ कि छैन ?
अहिलेसम्म अनुभव गरेको छैन । सुन्दा सामान्य लाग्छ । कता–कता कौतुहल्ता पनि लाग्छ । यौन र सेक्सका कुरा सुन्दा काउकुती पनि लाग्छ ।
फिल्म खेल्ने प्रस्ताव आएको छ कि छैन ?
प्रस्ताव आउँछ । फिल्म शुटिङ भएको छैन । फिल्म खेल्नभन्दा पनि मोडलिङमै काम गरेर राम्रो कलाकार बनेर चिनिनु छ । ठूलो फिल्मभन्दा सानै कुरामा रमाउन चाहन्छु । पछि कसैले फिल्म खेल्न प्रस्ताव राखे भने खेलौँला ।
तपाईलाई खाना पकाउन आउँछ ?
आउँछ । त्यति धेरै राम्रोसँग पकाउन जानेको छैन । सानोमा हुँदा राम्रोसँग पकाउँथे । कलाकारितातिर लागेपछि पकाउन भुल्दै गएको छु । पकाउन रहर लाग्छ ।